Ukusetyenziswa okuvelisa ngaphezulu kokusebenza kunye neengxaki zebhetri | I-Androidsis
Ezi zicelo zezona zibangela uninzi lweengxaki zebhetri kunye nokusebenza
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ibhetri, Khu seleko
Ukukhethwa kwezicelo ezikhoyo namhlanje kubanzi kakhulu. Sinezicelo ezisinceda kuzo zonke iintlobo zemisebenzi kwaye ziluncedo ngokubanzi. Kodwa, ayizizo zonke ezilungileyo kwifowuni yethu ye-Android. Kwiimeko ezininzi kunokubangela ukuba ifowuni ingasebenzi kakuhle. Nantsi into U-Avast wayefuna ukuqokelela kufundo.
Inkampani yezokhuseleko ibisenza uphando kwaye isizisela ingxelo. Kule ngxelo sifumana usetyenziso oluvelisa ezona ngxaki zokusebenza kunye neebhetri kwifowuni yethu. Ke isifundo sika-Avast esinomdla kakhulu kubathengi.
Kolu hlalutyo lwenziwe yinkampani, izicelo zahlulwe zangamacandelo ahlukeneyo. Ke ngoko, siza kuhlalutya nganye yezi ndidi ngokwahlukeneyo. Ke sinako ukuhlalutya nganye nganye kubunzulu obungaphezulu.
1 Izicelo ezisebenzisa ukusebenza ngakumbi xa inkqubo iqala
2 Izicelo ezisebenzisa ukusebenza ngakumbi xa zivulwa ngumsebenzisi
3 Izicelo ezisebenzisa ibhetri eninzi xa inkqubo iqala
4 Iiapps ezisebenzisa ibhetri eninzi xa ziqaliswe ngumsebenzisi
Izicelo ezisebenzisa ukusebenza ngakumbi xa inkqubo iqala
Eyokuqala yeendidi zezi zicelo ezo ukusebenza okungaphezulu abakutyayo okanye banefuthe elikhulu ekusebenzeni kwefowuni xa inkqubo iqala. Ke ukufakwa kwezi zicelo kwifowuni yakho ye-Android kubangela ukuba ukusebenza kwayo kuchaphazele kakhulu. Emfanekisweni ungabona iinkqubo ezili-10 ezenza uluhlu.
Eyona nto ibalaseleyo kuko konke kukuba i-Samsung kunye noGoogle babelana ngamalungu alishumi oluhlu. Inkampani yaseKorea inoxanduva lwezinto ezilishumi kwezi zilishumi kuluhlu. Ngelixa uGoogle ejongene nezintandathu ezisele. Ke ngabo abasebenzisa owona msebenzi xa inkqubo iqala. Yintoni egqithisile, kukho ezinye ii -apps uninzi lwethu oluzifakileyo kwifowuni.
Izicelo ezisebenzisa ukusebenza ngakumbi xa zivulwa ngumsebenzisi
Okwesibini, sifumana usetyenziso ukucoca ngakumbi ukusebenza kwefowuni xa ingumsebenzisi obaqalisayo. Ke ukuba sivula nayiphi na kweziapps ngokwethu, siya kubona isiphumo ekusebenzeni kwefowuni yethu. UGoogle uphinde waba ngomnye wabalinganiswa abaphambili kolu luhlu. Kuba inezimbini kuyo. Kwakhona i-Samsung ibuyela kuxinzelelo lwamagama ambalwa kolu luhlu.
Ukongeza, sifumana amanye amagama uninzi lwawo owaziyo ngokuqinisekileyo. Phakathi kwabo kudumileyo (kwaye kungengesizathu esivakalayo) uMcoci ococekileyo. Ezinye zezinto esizisebenzisayo esinamaxesha athile, nangona zikho ezinye ezingenamsebenzi.
Izicelo ezisebenzisa ibhetri eninzi xa inkqubo iqala
Kwinqanaba lesithathu sele sigxile kwibhetri kunye nefuthe ezinokuthi iinkonzo zibe nalo kuyo. Okokuqala sigxila kwezi iiapps ezisebenzisa ibhetri eninzi xa inkqubo yefowuni iqala. Kukho uninzi lweenkcukacha ezinomdla kolu luhlu, ngokungathandabuzekiyo eliza kutsala umdla wabasebenzisi abaninzi. Ekuqaleni Sifumana isicelo esiza kunceda ukugcina ibhetri.
Kwakhona, Siyabona ukuba i-Samsung ibuyile kolu luhlu imelwe kakuhle. Kuba kukho iiapps ezininzi ezivela kwinkampani yaseKorea ezingene kuyo. Kukwaphawuleka ukuba Ubukho be-WhatsApp kunye ne-Facebook ngokufanayo. Ke banokuninzi abanokuphucula malunga nokucoca ibhetri xa inkqubo yefowuni iqala.
Iiapps ezisebenzisa ibhetri eninzi xa ziqaliswe ngumsebenzisi
Udidi lokugqibela kuluhlu lubandakanya Ezi zicelo zisebenzisa ibhetri engaphezulu kwifowuni yakho xa ingumsebenzisi ngokwakhe ozivulayo. Ukuze ungalahli umkhwa, i-Samsung iphinde ibekhona kolu luhlu. Nangona ngeli xesha sijamelene noluhlu lwezona zinto zahlukileyo. Kodwa siyafumanisa izicelo ezaziwayo kuyo. Amagama ngokuqinisekileyo ngaphezu kweyodwa afake kwifowuni yakho.
Isicelo esenza ukuvela kwakhona siCocekile Master. Enye yezona zinto zimbi esinokuzifaka kwifowuni kwaye ayisebenzi. Kwaye ngoku sinokubona kuphela ukusebenzisa ibhetri kunye nokuchaphazela ukusebenza kwefowuni yakho.
Ucinga ntoni ngolu phononongo luqhutywa ngu-Avast?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezi zicelo zezona zibangela uninzi lweengxaki zebhetri kunye nokusebenza